Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ọgwụgwọ Psoriasis Plaque Ọhụrụ
Sun Pharma Canada Inc., onye enyemaka nke Sun Pharmaceuticals Industries Limited (Sun Pharma) gụnyere ndị enyemaka ya na / ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-akpakọrịta) kwupụtara PrILUMYA ™ (injections tildrakizumab), ọgwụgwọ maka ndị okenye bi na psoriasis plaque na-agafeghị oke na nke siri ike, dị ugbu a na Canada.
"Obi dị anyị ụtọ iwebata ndị Canada na-arịa ọrịa a na-ahụkarị, na-egbochi ma na-elegharakarị ọgwụgwọ usoro ndu a dị mkpa. Mwepụta a bụ ihe dị mkpa maka Sun Pharma, ka anyị na-agbasa Pọtụfoliyo dermatology na Canada, "Abhay Gandhi, CEO North America, Sun Pharma kwuru. "Site na afọ ise nke ọgwụgwọ dị irè nke psoriasis plaque na-agafeghị oke na nke siri ike, ILUMYA na-egosipụta nkwa anyị ịnye ọgwụ ọhụrụ iji kwado ndụ onye ọrịa na nhọrọ dọkịta."
Plaque psoriasis bụ ọrịa autoimmune na-adịghị ala ala nke na-apụta n'akpụkpọ ahụ dị ka ọbara ọbara, ebe a na-agbago elu nke akpụkpọ ahụ kpuchie ya na akpịrịkpa na-acha ọcha nke nwere ike ịgbawa na ọbara. Ọ na-emetụta ihe dị ka otu nde ndị Canada. Psoriasis plaque dị oke oke na nke siri ike na-emetụta ihe dịka 35% nke ndị ọrịa. Ihe ịma aka dị mkpa bụ na ọtụtụ ọgwụgwọ na-akwụsị ịrụ ọrụ karịa oge na mgbaàmà na-alọghachi. Ịdị ogologo nke ọgwụgwọ n'ime ogologo oge bụ mkpa na-enweghị atụ maka ọtụtụ ndị ọrịa.
Melinda Gooderham, onye na-ahụ maka ọgwụgwọ anụ ahụ na onye isi nlekọta ahụike kwuru, "Percell plaque na-agafeghị oke na nke siri ike nwere ike ime ka ọ sie ike inwe ahụ iru ala na akpụkpọ ahụ nke gị na ịchọ ọgwụgwọ dị irè nwere ike bụrụ ihe ịma aka dịka ọrịa ahụ n'onwe ya." na SKiN Center for Dermatology na Peterborough, Ontario. "Ndị ọrịa anyị chọrọ nhọrọ maka ọgwụgwọ dị irè, na-adịgide adịgide na nke na-aga n'ihu na Canada na ILUMYA ga-enyere aka gboo mkpa ahụ."
N'ime akwụkwọ akụkọ ndị ọgbọ e bipụtara na-enyocha nyocha nke nyocha nke nyocha abụọ nke reSURFACE 1 na reSURFACE 2, data na-egosi na ọtụtụ ndị ọrịa na ILUMYA nọgidere na-azaghachi na profaịlụ nchekwa na-emesi obi ike site na afọ 5 nke ọgwụgwọ.
N'ime ndị ọrịa a na-emeso ILUMYA 100 mg, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ itoolu n'ime 10 nọgidere na-azaghachi ha site na Afọ 5. ILUMYA 100 mg kwadoro nke ọma n'oge ule 3 Phase. Mmeghachi omume ọjọọ atọ ahụ mere ugboro ugboro karịa placebo na ≥1% na ule ụlọ ọgwụ bụ ọrịa iku ume elu (15.1% vs. 12.3%), mmeghachi omume saịtị injection (3.9% vs. 2.6%) na isi ọwụwa (3.2% vs. 2.9% ).
Na Canada, ụfọdụ ndị ọrịa tinyere aka na ọmụmụ ihe ahụ akọwo na ha ka nwere akpụkpọ ahụ dị ọcha mgbe afọ asatọ gasịrị.
“Enwere m ndị ọrịa a na-emeso ILUMYA afọ asatọ gara aga, ahụwokwa m ka akpụkpọ ahụ ha na-akawanye mma ruo n'ọkwa dị elu nke mkpochapụ, ma na-anọpụ iche ruo ogologo oge. N’ihi ya, ndụ ha akawanyewokwa mma,” Dr. Gooderham kwukwara.
"N'ime ndụ m nile, m na-alụso ọrịa psoriasis plaque na-adịghị agafe agafe na nke siri ike ọgụ, ana m atụgharịkwa n'etiti ude na ude ndị na-adịghị arụ ọrụ ma na-agbakwunyere m nchekasị. Ruo mgbe m mụtara banyere ILUMYA, echere m na agwụla m nhọrọ ọgwụgwọ," Ainsley Leween, onye ọrịa psoriasis kwuru. "Kemgbe m malitere iji ILUMYA afọ asatọ gara aga, a na-achịkwa psoriasis m."
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), site na nyocha ọgwụ nkịtị, akwadowo nke ọma na mpaghara ndị ọ na-emekọrịta ihe na a ga-akwụghachi ngwaahịa ILUMYA maka ndị ọrịa nwere psoriasis plaque na-agafeghị oke na nke siri ike, mgbe onye dọkịta na-ahụ maka anụ ahụ kwuru.